အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် (ခွေး၊ကြောင်) မွေးမြူရာတွင် မှတ်ပုံတင်မရှိပါက ဒဏ်ငွေချမည် - The Lifestyle Myanmar
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေတွင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် မွေးမြူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဌာန်းထားချက်အရ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် (ခွေး၊ကြောင်) မွေးမြူရာတွင် မှတ်ပုံတင်မရှိပါက ငွေဒဏ်ကျပ်(၁)သိန်းမှ ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ချမှတ်နိုင်ပြီး ဆက်လက် ကျူးလွန်မှုအတွက် ထောင်ဒဏ် (၆)လအထိ ချမှတ်နိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်စိုးက ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်နန္ဒအောင်က “ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို မှတ်ပုံတင်များ အလွယ်တကူ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန်၊ မွေးမြူသူများအနေဖြင့် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု ရှိစွာ စနစ်တကျ မွေးမြူတတ်စေရန် အသိပညာပေးခြင်းများ ကို မြို့နယ်များ၊ ရပ်ကွက်များအထိစိစစ် ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် အသိပညာ ပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ” မေးမြန်းခဲ့မှုအား ပြန်လည်ဖြေကြားရာတွင် ယင်းသို့ ထည့်သွင်းပြောဆို ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေတွင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် မွေးမြူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပုဒ်မ(၂၁၆)ကော်မတီသည် မြို့တော် နယ်နိမိတ်အတွင်း ကျွဲ၊ နွားတိရိစ္ဆာန်နှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ကျွဲနွားပွဲ ဈေးနှင့် တိရစ္ဆာန်အရှင်ရောင်းဝယ်ရေးဈေးဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးအရေးယူခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
ပုဒ်မ(၃၂၁)၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)မည်သူမျှ မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ကော်မတီ ကထုတ်ပေးသည့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလိုင်စင် မရှိဘဲ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် မွေးမြူခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ သယ်ဆောင်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းမပြုရ။ ပုဒ်မ (၃၂၁)၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)ပါ တားမြစ်ချက်ကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း သို့မဟုတ် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ပထမအကြိမ်ကျူးလွန်ခြင်းအတွက် ငွေဒဏ်ကျပ်(၁)သိန်းမှ ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ချမှတ်ရမည်။ ဆက်လက်ကျူးလွန်မှုအတွက် ထောင်ဒဏ်(၆)လအထိ ချမှတ်ရမည်။ဟု ပြဌာန်းထားကြောင်း ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် အိမ်မွေးခွေးကြောင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရာ၌ လွယ်ကူစွာလျှောက်ထားနိုင်ရေးနှင့် စနစ်တကျ စိစစ်ခွင့်ပြုနိုင်ရေး တို့အတွက် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာပုံစံကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၏ Website (www. ycdc. gov.mm)တွင် Download ပြုလုပ် ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ရုံးများတွင်လည်းကောင်း၊ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး နှင့် ဈေးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် သားသတ်ရုံများဌာနလက်အောက်ရှိ ကုသရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ (ခရိုင်ရုံး)များတွင် လည်းကောင်းရယူ၍ အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက် ကာ ကုသရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ (ခရိုင်ရုံး)များတွင် ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်ရန်နှင့် သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါက သတ်မှတ်အခွန်အခပေးသွင်း စေပြီး အိမ်မွေးခွေး၊ကြောင်မှတ်ပုံတင်ကို အလျင်အမြန်ထုတ်ပေးနိုင်ရန် အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ အိမ်မွေးခွေး၊ ကြောင်မှတ်ပုံ တင် ခြင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် တာဝန်ယူမှုရှိသော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် မွေးမြူမှုဖြစ်စေရန်နှင့် အများပြည်သူသို့ အ‌နှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် အတွက် အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာ၌ သွားလာထားရှိသော လေလွင့် တိရစ္ဆာန်ကို မှတ်ပုံတင်လုံးဝခွင့်မပြုခြင်း၊ မိမိမွေးမြူထားသော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်:ကျင်သို့ အနှောက် အယှက်တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရေးနှင့် ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူခြင်း ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်စည်းကမ်းများကို တိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ဝန်ခံကတိပြုစေခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ သဘောထားမှတ်ချက်ကိုပါ ရယူစေခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း” ဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် (ခွေး၊ကြောင်) မွေးမြူရာတွင် မှတ်ပုံတင်မရှိပါက ဒဏ်ငွေချမည်